माओवादी आन्दोलन बक्ररेखा बनेर अगाडि बढ्दैछ
यज्ञ बहादुर के.सी.(प्रभात)
२०७८, जेठ ०१
माओवादी आन्दोलन पूरा भएको छैन् । बिधि, नीति, बिचार भन्दा बस्तुगत अवस्था र समय वलवान बनेर आइदियो । यो राजनीतिमा गम्भिर समस्या बनेर आएको पक्कै पनि हो ।
एउटा भनाई छ, ‘इतिहास बक्ररेखा बनेर अगाडि बढ्छ ।’ तत्कालिन अवस्थामा राज्य राजतन्त्रात्मक बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाले लादेको थियो । सरकारको फेरवदल, संसदको किनबेच, महगंी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, हत्याआतंकले देश आक्रान्त थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी)ले जनतालाई संसदको किनबेच, महगंी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, हत्याआतंक, निरङकुशता, र विभेदका विरुद्धमा उत्रन आह्वान गर्नु प¥यो । जनयुद्धको ताकतले राज्यको आमुल परिबर्तन मात्र गरेन २ सय ५० बर्षको सामन्ती राजतन्त्रको समेत अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापना ग¥यो । गणतन्त्रको संविधान घोषणा पछि मधेश लगायत केही जाती र क्षेत्रमा असन्तुष्टि देखिएपनि मुलभुत रुपमा संविधानले अग्रगमन, समावेशीता र समानुपातिकको वकालत गरेको छ । तर राजनीति परिदृश्यहरुले आधारभुत रुपमा जस्ले परिबर्तनको नेतृत्व ग¥यो । त्यो शक्ति कमजोर, विभाजित जस्तो की अन्योलतामा परे जस्तो देखिने, इतिहासमा कुनै योगदान नदिएका या भनौ योगदान दिने अवसर आएका वेला टुलुटुलु हेरेर बसेका त्यति मात्रै होइन परिबर्तनमा अरुची राख्ने शक्तिहरु, व्यक्ति र दल अगाडि जनमत सहित देखिनुले जनताले लडेर ल्याएको व्यवस्था धरापमा पर्ने त होइन भन्ने अनेकन आशंका जन्मेका छन् ।
प्रतिगामी शक्तिहरु निर्लज्ज राज्यको शोषण र दोहनमा लागेका छन । भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ । संविधान नीति नियम निस्कृय भएका छन । हामी यसलाई टुलुटुलु हेरेर बस्नु दुःखद संयोग जस्तै भएको छ । देश र जनताका लागि प्राण हत्केलामा राखेर लडेको माओवादी शक्ति एकताबद्धभएर सबै खाले खराबीहरुका बिरुद्ध आफ्नो पहिचान र ताकत प्रस्तुत गर्ने बेला आएको छ । के माओवादीहरुको जिम्मेवारी पुरा भएको हो त ?आजको ज्वलन्त प्रश्न हो । हामीले परिबर्तन संभब तुल्याउ र यस्को रक्षा बिकास र बैज्ञानिक प्रयोग पनि माओबादी ले नै गर्ने हो । यसर्थ निरन्तर संघर्षको माओवादी बिधिको विकास माओवादी धाराहरुको बृहत एकता गर्नु पर्दछ । यसो भएमा मात्रै नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षा हुनेछ यो नै आजको आजको तड्कारो आवश्यकता हो ।
नरबहादुर कर्माचार्यको सम्झनामा अन्तरक्रिया
२०७८, श्रावण ०९
प्यूठान, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी केन्द्र) वडा कमिटि प्यूठान नगरपालिका–३ ले अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । नेकपाका संस्थापक क. नरबहादुर कर्माचार्यको ८ औं स्मृति दिवसको अबसरमा वडा स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता अन्तरक्रिया कार्यक्रम...
ए, प्रतिगमनका बा अव त अति भो, राष्ट्रलाई क्षति भो !
२०७८, असार १०
काठमाण्डौ, काँग्रेस निकट नेविसंघ, माओवादी केन्द्रनिकट अखिल (क्रान्तिकारी), एमालेको माधव नेपाल समूहनिकट अनेरास्ववियु, जसपानिकट समाजवादी विद्यार्थी युनियन र राष्ट्रिय जनमोर्चानिकट अखिल (छैठौं)ले बिहीबार काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गमा विरोध प्रदर...